ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံရှိ sputtering ပစ်မှတ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလားအလာများ
Sputtering ပစ်မှတ်များသည်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်များတွင်လျင်မြန်သောတိုးတက်မှုအရှိန်ကိုပြနေသည်, ရည်မှန်းချက်ကြီးသောစက်မှုလုပ်ငန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည်စျေးကွက်ခွဲခြားမှုအားလုံးအနက်ပထမဆုံးဖြစ်သည်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပါ ၀ င်သောထုတ်ကုန်များသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ အသေးစားပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီများစွာတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ယန္တရားများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်, အနိမ့်ဆုံးပစ်မှတ်စျေးကွက်သည်စျေးနှုန်းစစ်ပွဲအခြေပြုပုံစံဖြစ်လာလိမ့်မည်; သံလိုက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကဲ့သို့ high-end စက်မှုစျေးကွက်များတွင်ပစ်မှတ်များ, semiconductors များ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်နည်းပညာ ဦး ဆောင်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆက်လက်တင်ပြပါလိမ့်မည်, ပြည်တွင်းပြည်ပအဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်ပစ်မှတ်ပေးသွင်းသူများသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်အကြွင်းမဲ့အားသာချက်ရှိလိမ့်မည်, နှင့်အပေါ်ယံထုတ်လုပ်သူများသည်ပစ်မှတ်ပေးသွင်းသူများအပေါ်ပိုမိုမှီခိုအားထားလိမ့်မည်.
Sputtering ပစ်မှတ်များသည်အလှဆင်ခြင်းအပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းခွင်၌မတူညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြလိမ့်မည်, အပေါ်ယံထုတ်လုပ်သူများ၏ထုတ်ကုန်အသွင်ပြောင်းခြင်း, sputtering ပစ်မှတ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်အတော်လေးပြည့်နှက်နေသည်, tool coating လုပ်ငန်းတွင်တိုးတက်မှုအတွက်အခန်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်, နိုင်ငံခြားပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီများတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အရှိန်ကအရမ်းမြန်မှာမဟုတ်ဘူး; high-end coating စျေးကွက် tool tool အပေါ်ယံပိုင်းပစ်မှတ်ပစ္စည်းများကြောင့်ပြည်တွင်းပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီများသည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်တွင်ရှိနေသည်. အောင်မြင်သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူ, ပြည်တွင်းပစ်မှတ်ပစ္စည်းများသည်စျေးအားသာချက်ရှိလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းပစ်မှတ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စျေးကွက်တစ်ခုအနိုင်ရလိမ့်မည်။ သံလိုက်သိုလှောင်မှုပမာဏသည်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။, သံလိုက်ဓာတ်ဖမ်းယူမှုအတွက်ပစ်မှတ်များလည်းပွင့်လန်းလာလိမ့်မည်, နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်များသည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်။ semiconductor လုပ်ငန်းသည်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းမျိုးစုံလိုအပ်သည်, တစ်ခုချင်းစီကိုပမာဏအများကြီးသုံးပါတယ်. နိုင်ငံခြားနည်းပညာသည်ရင့်ကျက်လာပြီးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်အားသည်အားကောင်းသည်, ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဦး ဆောင်နိုင်သောအနေအထား၌ရှိနေလိမ့်မည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စက်ရုံသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလားအလာများစွာရှိသည်. နောက်၌5သို့ 10 နှစ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးသည်မကြာမီကမ္ဘာ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်။. ၎င်းသည်သမားရိုးကျစွမ်းအင်ရင်းမြစ်အချို့ကိုအစားထိုးရုံတင်မကဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းရဲ့နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲမှုကြီးထွားမှုနဲ့အတူကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးရဲ့အဓိကခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်လာပါတယ်, နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များအတွက် sputtering ပစ်မှတ်များသည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှု၏ပတ်ပတ်လည်သစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်.
ပြန့်ကျဲနေသောပစ်မှတ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်နည်းပညာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။, R ၏ကျယ်ပြန့်&D ထုတ်ကုန်များနှင့်ထူးခြားသောထုတ်ကုန်များစွာသည်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု၌စကားပြောပိုင်ခွင့်ကိုရရှိလိမ့်မည်။, စုဆောင်းထားသောရန်ပုံငွေပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်, အလှည့်အပြောင်းကိုကြာရှည်စေခဲ့သည်, ဒါတွေအားလုံးကပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လည်ပတ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာပိုမိုခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းရဲ့ချဲ့ထွင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီလုပ်ငန်းမှာယှဉ်ပြိုင်မှုကိုပိုမိုပြင်းထန်စေပါလိမ့်မယ်။, ဦး တည်သောပေးသွင်းသူများ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိလိမ့်မည်။ စျေး ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ဦး တည်သောပေးသွင်းသူများသည်အပေါ်ယံထုတ်လုပ်သူများကနှစ်သက်လိမ့်မည်။.
sputtering ပစ်မှတ်များ၏အသုံးချနှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ပစ်မှတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ cuboid နှင့် cylindrical magnetron sputtering ပစ်မှတ်များသည်အစိုင်အခဲများဖြစ်သည်။, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လက်စွပ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သုံးသောပုံသဏ္ringန်လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုသုံးသည်, သံမဏိပြားများကိုအကြားညီမျှအကွာအဝေးတွင်လက်စွပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည်, ထို့ကြောင့်အနည်ကျသောရုပ်ရှင်၏အထူကိုထိခိုက်စေသည်, ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏အသုံးချမှုနှုန်းသည် ၂၀%မှ ၃၀%သာရှိသည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင်ရာထူးတိုးပြီးအသုံးချနေသောလှည့်ပတ်သောသံလိုက်သံလိုက်ထရွန်ပစ်တံသည်အခေါင်းပေါက်ဖြစ်သည်။, fixed strip magnet assembly ကိုလှည့်နိုင်သည်, ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်ကိုတစ်ပုံစံတည်းပုံသွင်းနိုင်သည် 360 ဒီဂရီ, နှင့်ပစ်မှတ်အသုံးပြုမှုနှုန်းသည်မြင့်မားသည် 80%.
ကာဗွန်နိမ့်စီးပွားရေးမြင့်တက်လာသည်, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသည်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်မဟာဗျူဟာကျသောအချက်များဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများသည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သည်။. စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်, ၎င်းသည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်သည်. အခြားတဖက်တွင်မူ, ဒါကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပါ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၎င်းသည်ကော်ပိုရိတ်ပုံရိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသူများ၏ယုံကြည်မှုရရှိခြင်းတို့အတွက်အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှိပြီးသားအသေးစားပစ်မှတ်စက်ရုံများသည်စက်ပစ္စည်းများနှင့်လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။, ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတိုးတက်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပိတ်ပစ်မယ့်အန္တရာယ်ကိုတောင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ဦး တည်သောစက်မှုလုပ်ငန်းသည်တောက်ပသောအနာဂတ်ရှိသည်။ အပေါ်ယံအလွှာများလျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်စျေး ၀ ယ်လိုအားလျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်ခြင်းတို့သည်ပစ်မှတ်စျေးကွက်၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မှာသေချာသည်။, ပစ်မှတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းသစ်သည်နိုင်ငံ၏အကြီးအာရုံစိုက်မှုနှင့်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပြီး .. အပေါ်ယံစျေးကွက်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အမျိုးသားထောက်ပံ့မှုတိုးလာခြင်း, ဦး တည်သောကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်စုသည်လျင်မြန်စွာကြီးပြင်းလာလိမ့်မည်, ဦး တည်သောလုပ်ငန်းတွင်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာသည်, စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းနှင်သည်, စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသိသိသာသာဖန်တီးပေးနိုင်သည်
အကြို: လှည့်ပတ်နေသော Sputtering ပစ်မှတ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
နောက်တစ်ခု: sputtering ပစ်မှတ်များ၏အမျိုးအစား